Fiverenana an-tsehatra :: Hanolotra seho ranoiray etsy Mahamasina i Poopy • AoRaha
Fiverenana an-tsehatra Hanolotra seho ranoiray etsy Mahamasina i Poopy
Ho fihaonan’ny tia sy ny manina ny fampisehoana hotontosain’i Poopy etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina
amin’ny 10 novambra 2019. Fotoana andrasan’ny maro izy ity, indrindra ireo mpankafy hatramin’izay, satria tany amin’ny telo taona lasa no nisy farany ilay lanonana “Poopy zato isan-jato”. Fampisehoana feno, araka izany, no hataon’ity mpanakanto ity amin’io andro io.
Vaovao lehibe nampitain’ny mpikarakara ihany koa ny fandraisana anjaran’ireo mpanakanto efa nampiara-peo tamin’i Poopy ao anatin’ny fety. “Fiarahana hanjakan’ny tolotra tsy ampoizina izy io satria amin’ny andron’ny fampisehoana mihitsy vao ho fantatry ny mpijery ireo mpanakanto nasaina ireo. Ho sehon’ny taona 2019 ny fanamby apetrakay”, hoy i Tantely Ralalarison avy amin’ny
Live Prod mpikarakara ny hetsika.
Raha ny fandaharan-kira indray no asian-teny dia hisesy ao ireo hira nanamarika an’i Poopy sy ireo nisongadina tao anatin’ireo rakikira efa navoakany nandritra ny telopolo taona mahery nanaovany mozika. Maro ireo liana na dia ny hahita ny fitafian’i Poopy eny an-tsehatra fotsiny aza. Nambaran’ny mpikarakara fa efa tapitra ny tapakila famandrihana ny seza mena. Rahampitso kosa no hivoaka ny tapakila tsotra ho an’ny daholobe.
Antsa tononkalo :: Hifarimbona amin’ny « MAHATSANGY » i Ranoe, Toly ary i Zo Maminirina